Ururka SEDYO Finland Oo Yeeshay Munaasibad Balaadhan Oo Lagu Taageerayay Shirwaynihii Caano Kadhan Iyo Mashaariicaha Horumarineed Ee DDSI. - Cakaara News
Ururka SEDYO Finland Oo Yeeshay Munaasibad Balaadhan Oo Lagu Taageerayay Shirwaynihii Caano Kadhan Iyo Mashaariicaha Horumarineed Ee DDSI.
Helsink-Finland(CN) waxaa 18.04.2015 ay munaasabad balaadhani kadhacday magaalda Helsinki ee wadanka Finland oo lagu bogaadiyay shirkii caanka noqday ee labaxay Caano-kadhan iyo waliba hormarka deeganka kasocda sida jaamcada Qabridahar iyo warshada sonkorta Godey iyo waliba hanaanka hormareed ee wadanka ka hirgalay. Shirka oo ay soo agaasimeen ururka dhalinyarada Sedyo Finland, ayaa wuxuu u qabsoomay si habsami leh waxaana kasoo qayb galay bulshada qeybaheeda kala gadisan.
Shirka waxaa si habsami ah oo daadihinayay afhayeenka ururka SEDYO FINLAND mudane Maxamed Aamiin Dhaqane, waxaa ugu horaynba hadalka qaatay gudoomiyaha ururka mudane Yusuf Axmed Maxamuud oo ku dheeraaday faa,idadii shirkii caano kadhan iyo waliba mashaariicaha horumarineed sida jaamacada Qabridahar iyo Warshada Sonkorta Godey oo uu sheegay in ay tahay talaabo aad muhiim u ah, wuxuu gudoomiyuhu bogaadiyay dowlada uu hormuudka kayahay mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Shirka waxaa khadka telfoonka kaga qaybgalay Wisiirka qurbajoogta mudane Cabdi Bari Macalin oo khudbad dhaxal gal ah ka jeeday munaasabada waxaa dhankiisa khadka telfoonka kaga qayb galay gudoomiyaha ururka dhaliyarada SEDYO SWEDEN mudane Maxamed Sheekh Xasan(Huways) oo ku dheeraaday bogaadiyayna madaxda dowlada iyo howlkarnimada iyo daacanimada ay muujianayaan. Waxaa shirka mooraal u ahaa in Nimco Dareen (Nimco Wadani) ay shirka khudba dheer kasoo jeedisay oo ay ku amaantay dowlada uu hogaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar.
Ururka haweenka dowlad deeganka oo ay u hadashay G/marwo Aniisa Maxamed Deeq oo ku nuuxnuuxsatay meesha lamarayo iyo hormarka taaba galay aad u amaantay dadaalka dowlada ayadoo kawarbixisey heerka uu maraayo Deeganku una bogaadisay madaxwaynaha iyo kabinetkiis guul.
Waxaa kale oo goobta ka hadlay xubnaha ururka Sedyo Finland oo dhamaantood balanqaaday in dowlada ay garab iyo gaashaan u yihiin. waxaa kale oo shirka ka hadlay Maxamed Maxamuud oo ka mid ah odayaasha jaaliyda ee ku nool wadanka Finland asaga oo ka warbixiyay deegaanka oo uu in muda ah ku maqnaa.
Shirkan ayaa sidoo kale ay dhamaan xubnuhu u rajeeyeen XDSHSI hirgalinta siduu u noqon lahaa horumuudnimada sidii ay doorashadu u noqon lahayd mid nabadgaliyo iyo cadaalad ku dhamaata.